ပေါင် ၅၉ သန်းတန်ကြေးရှိတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်ကို အလွတ်ခေါ်ယူဖို့ ပီအက်စ်ဂျီဆွေးနွေး
6 Oct 2017 . 11:54 AM
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ သိသိသာသာ လျှော့ကျခဲ့ပြီး စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာအဆင့် ၇ နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့သလို အာဆင်ဝင်းဂါးမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့လွဲချော်ပြီးနောက် တိုက်စစ်မှူးဆန်းချက်ဇ်အနေနဲ့ အမြောက်တပ်ကနေထွက်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီအချိန်ကတည်းက ဟန်တပြင်ပြင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့စာချုပ်ကလည်း လာမယ့်နွေမှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်သလို စာချုပ်အသစ်အတွက် ဘာဆွေးနွေးမှုမှမလုပ်ထားသေးတာကြောင့်လည်း ဒီရာသီနွေအပြောင်းအရွှေ့မှာတုန်းက အခြားအသင်းတစ်သင်းသင်းကို ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မန်စီးတီးကခေါ်မယ်ဟန်တပြင်ပြင်ရှိခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး အာဆင်နယ်မှာပဲ ဒီရာသီ ဆက်လက်သောင်တင်နေမှာပါ။
Express သတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ခုချိန်မှာ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်ဖို့အလားအလာများနေတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်ကို ဥရောပအသင်းကြီးတစ်သင်းက ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းတွေအရ အရင်ကလည်း ဆန်းချက်ဇ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီဟာ ခုတဖန် သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို ပြန်ပြလာခဲ့ပြီး စာချုပ်အတွက် ကစားသမားကို Bonus ကြေး ပေါင် ၁၀ သန်းပေးဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့မတူပဲ ပြင်သစ်အသင်းတွေအနေနဲ့ ဇန်နဝါရီမှာ အလွတ်ခေါ်ယူလို့ရမယ့် ကစားသမားတွေကို စာချုပ်ကိစ္စ ကြိုတင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဈေးကွက်တန်ဖိုးအရ ပေါင် ၅၉ သန်း တန်ကြေးရှိတဲ့ ဆန်းချက်ဇ်ကို အလွှတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာ အသင်းတိုင်းအတွက် တကယ့်ကြီးမားတဲ့ အမြတ်အစွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီခဲ့တဲ့နွေအပြောင်းအရွှေ့တုန်းကလည်း ဆန်းချက်ဇ်ကို အသင်းရဲ့မြင့်မားတဲ့လစာဖြစ်တဲ့ တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင် ၂၇၅၀၀၀ နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့် ကစားသမားဘက်ကနေ စိတ်မဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီအနေနဲ့ နွေအပြောင်းအရွှေ့မှာ နေမာ (ပေါင် ၂၀၃.၆ သန်း)၊ ဘတ်ပေ (ပေါင် ၁၆၅ သန်း) တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးတွေသုံးစွဲခဲ့လို့ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနဲ့ ငြိစွန်းနိုင်တဲ့အတွက် ဖိအားတွေခံစားနေခဲ့ရတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်ပေကိစ္စမှာတော့ ကစားသမားကို ကနဦးအငှားအနေနဲ့ ခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပြီး အပြီးသတ်အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေကို လာမယ့်နွေမှာ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်းချက်ဇ်အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ ကစားသမားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရ ပီအက်စ်ဂျီရဲ့အကြိုက်ဖြစ်သလို အလွှတ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်လို့ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနဲ့လည်း ငြိစွန်းစရာအကြောင်းမရှိလို့ ပီအက်စ်ဂျီအနေနဲ့ အရခေါ်ယူသွားနိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ပေါငျ ၅၉ သနျးတနျကွေးရှိတဲ့ ဆနျးခကျြဇျကို အလှတျချေါယူဖို့ ပီအကျဈဂြီ ဆှေးနှေး
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ သိသိသာသာ လြှော့ကခြဲ့ပွီး စိတျပကျြဖှယျရာအဆငျ့ ၇ နဲ့ အဆုံးသတျခဲ့သလို အာဆငျဝငျးဂါးမနျနဂြောဖွဈခဲ့တဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှဈကတညျးကစလို့ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ခနျြပီယံလိဂျနဲ့လှဲခြျောပွီးနောကျ တိုကျစဈမှူးဆနျးခကျြဇျအနနေဲ့ အမွောကျတပျကနထှေကျဖို့ ပွီးခဲ့တဲ့ဆောငျးရာသီအခြိနျကတညျးက ဟနျတပွငျပွငျဖွဈနခေဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့စာခြုပျကလညျး လာမယျ့နှမှော ကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈသလို စာခြုပျအသဈအတှကျ ဘာဆှေးနှေးမှုမှမလုပျထားသေးတာကွောငျ့လညျး ဒီရာသီနှအေပွောငျးအရှမှေ့ာတုနျးက အခွားအသငျးတဈသငျးသငျးကို ပွောငျးလိမျ့မယျလို့ ထငျမှတျခဲ့ကွပါတယျ။ မနျစီးတီးကချေါမယျဟနျတပွငျပွငျရှိခဲ့ပမေယျ့ မအောငျမွငျခဲ့တဲ့နောကျဆုံး အာဆငျနယျမှာပဲ ဒီရာသီ ဆကျလကျသောငျတငျနမှောပါ။
Express သတငျးရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ခုခြိနျမှာ အသငျးလကျမဲ့ဖွဈဖို့အလားအလာမြားနတေဲ့ ဆနျးခကျြဇျကို ဥရောပအသငျးကွီးတဈသငျးက ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားလာခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ သတငျးတှအေရ အရငျကလညျး ဆနျးခကျြဇျကိုစိတျဝငျစားခဲ့တဲ့ ပီအကျဈဂြီဟာ ခုတဖနျ သူတို့ရဲ့စိတျဝငျစားမှုကို ပွနျပွလာခဲ့ပွီး စာခြုပျအတှကျ ကစားသမားကို Bonus ကွေး ပေါငျ ၁၀ သနျးပေးဖို့ ဆန်ဒရှိနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အင်ျဂလိပျကလပျအသငျးတှနေဲ့မတူပဲ ပွငျသဈအသငျးတှအေနနေဲ့ ဇနျနဝါရီမှာ အလှတျချေါယူလို့ရမယျ့ ကစားသမားတှကေို စာခြုပျကိစ်စ ကွိုတငျဆှေးနှေးနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဈေးကှကျတနျဖိုးအရ ပေါငျ ၅၉ သနျး တနျကွေးရှိတဲ့ ဆနျးခကျြဇျကို အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူနိုငျဖို့ဆိုတာ အသငျးတိုငျးအတှကျ တကယျ့ကွီးမားတဲ့ အမွတျအစှနျးပဲဖွဈပါတယျ။ ပွီခဲ့တဲ့နှအေပွောငျးအရှတေု့နျးကလညျး ဆနျးခကျြဇျကို အသငျးရဲ့မွငျ့မားတဲ့လစာဖွဈတဲ့ တဈပတျလုပျခ ပေါငျ ၂၇၅၀၀၀ နဲ့ ချေါယူဖို့ ဆှေးနှေးခဲ့ပမေယျ့ ကစားသမားဘကျကနေ စိတျမဝငျစားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပီအကျဈဂြီအနနေဲ့ နှအေပွောငျးအရှမှေ့ာ နမော (ပေါငျ ၂၀၃.၆ သနျး)၊ ဘတျပေ (ပေါငျ ၁၆၅ သနျး) တို့အတှကျ ကွီးမားတဲ့ငှကွေေးတှသေုံးစှဲခဲ့လို့ ဘဏ်ဍာရေးစညျးမဉျြးနဲ့ ငွိစှနျးနိုငျတဲ့အတှကျ ဖိအားတှခေံစားနခေဲ့ရတဲ့အသငျးဖွဈပါတယျ။ ဘတျပကေိစ်စမှာတော့ ကစားသမားကို ကနဦးအငှားအနနေဲ့ ချေါယူထားတာဖွဈပွီး အပွီးသတျအပွောငျးအရှကေိ့စ်စတှကေို လာမယျ့နှမှော လုပျဆောငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဆနျးခကျြဇျအပွောငျးအရှကေ့တော့ ကစားသမားရဲ့စှမျးဆောငျရညျအရ ပီအကျဈဂြီရဲ့အကွိုကျဖွဈသလို အလှတျပွောငျးရှဖေို့ဖွဈလာမှာဖွဈလို့ ဘဏ်ဍာရေးစညျးမဉျြးနဲ့လညျး ငွိစှနျးစရာအကွောငျးမရှိလို့ ပီအကျဈဂြီအနနေဲ့ အရချေါယူသှားနိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
by yoelu . 12 mins ago
by Aung Kyaw Wai . 1 hour ago
by yoelu .2hours ago
by Kyithar Nyeinchan .2hours ago